Sehatra famerenana orinasa miaraka amin'ny fampidirana sosialy: manongotra
Alatsinainy, Jolay 2, 2012 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Ny mpividy an-tserasera dia aleony manao orinasa miaraka amin'ireo mpivarotra atokisany, ary ny fanatsarana ny lazan'ny marika dia tokony ho lohalaharana amin'ny laharam-pahamehana amin'ny fifandraisana eo amin'ny orinasa.
Ny fanadihadian'ny mpanjifa dia fomba mahazatra sy voasedra amin'ny fotoana hananganana ny fahatokisan'ny marika. Ireo fanehoan-kevitra ireo dia tokony haneho ny tena marina sy marina niainan'ny mpanjifa iray izay nividy sy nanandrana ny vokatra na serivisy. Saingy ny fanontaniana an-tapitrisany dolara dia ny fomba ahafahana mino fa ilay mpandinika dia mpanjifa manome famerenana tena izy fa tsy mpivarotra miova hevitra amin'ny fampielezana ny fampielezan-kevitra?
Misy tondro vitsivitsy ahitana:
Omeo antsipiriany momba ny mpandinika. Na dia mety tsy ho vita aza ny manome fampahalalana momba ny fifandraisana amin'ny antsipiriany, ny tanàna sy ny fanjakana mpandinika, miaraka amin'ny daty nividianany, dia afaka manamafy ny famerenana
Mampiasà ny herin'ny media sosialy. Ny hevitry ny namana, na ny olon-tsy fantatra aza tsy maninona.
Omeo fampahalalana ho an'ny prospect izay afaka manampy azy ireo hanamafy ny hevitra - fanadihadiana, antontan-taratasy ara-teknika, taratasy fotsy sns.
Asongadino ireo hevitra tsara indrindra ary fikarohana mifandraika amin'ny tambajotra sosialyo, ary aorio amin'ny fifanakalozan-kevitra, ny valim-pifidianana ary ny fanavaozana.
Ireo mpivarotra dia afaka nampiasa fitaovana toa Famerenana manongotra, sehatra famerenana fiaraha-mientana ara-tsosialy ao amin'ny orinasa hampandehanana ny firotsahana amin'ilay dingana.
Fanamarihana nataon'i Pluck ny platform dia mamantatra ny mpanjifa mety ary mitady ny hevitr'izy ireo, manome azy ireo safidy hampakatra sary sy horonan-tsary koa. Avy eo dia mamoaka ho azy ireo tsikera amin'ireo fantsona efa voafantina mialoha ny sehatra, ary mamela ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina handefa fanehoan-kevitra, ka manomboka ny fifanakalozan-kevitra ifanakalozan-kevitra izay afaka manome fomba fijery bebe kokoa momba ilay fanantenana. Ny mpivarotra dia mitazona ny fahaiza-manao antonony mba hahazoana antoka fa mijanona amin'ny fifehezana ny zava-drehetra. Mahazo safidy ihany koa ilay mpandinika hizara ny hevitra ao amin'ny Facebook, Twitter ary LinkedIn.
Na izany aza, mitoetra ihany ny fanontaniana momba ny fahatokisana ny famerenana. Pluck's Sivana fitokisana, fitaovana intuitive, afaka manampy amin'izany. Ny Trust Filters dia ahafahan'ny mpitsinjara mijery ny famerenana hijery ireo hevitra apetraka fotsiny amin'ny loharanom-baovao itokisany, toy ny sakaizany Facebook, na ireo manam-pahaizana hajain'izy ireo. Ho an'ny mpivarotra, Pluck dia manolotra rafitra valisoa feno feno izay manampy azy ireo hamantatra sy handiso hevitra ny famerenana ireo manam-pahaizana momba ny vokatra sy ireo mpikambana manana andraikitra hafa izay atokisan'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera.
Na izany aza, ny mpivarotra dia afaka mampiasa tsikera Pluck ho an'ny tanjona lavitra kokoa fa tsy fitaovana tsotra fotsiny hamoahana hevitra azo ekena. Ohatra, ny fampidirana ny Pluck Reviews amin'ny pejin'ny vokatra ao amin'ny tranokala, na amin'ny tranokala bitika hafa aza dia manampy amin'ny fanatsarana ny filan'ny motera fikarohana.
Tags: Customer reviewsMakàsehatra famerenana
Ento ny fifampiraharahana amina Widgets avy amin'ny Widgetbox